IP Warm: Ku Dhis Sumcaddaada Cusub Codsigan Kulaylinta IP-ga | Martech Zone
Jimco, Diisambar 25, 2020 Jimco, Diisambar 25, 2020 Douglas Karr
Haddii aad haysato saldhig macmiil oo aad u tiro badan oo ay ahayd inaad u haajirto adeeg bixiye cusub oo emayl ah (ESP), waxaad u badan tahay inaad ku dhex jirtay xanuunka kor u qaadista sumcaddaada cusub. Ama kaaga darane… uma aadan diyaargaroobin oo isla markiiba waxaad ku aragtay dhibaato mid ka mid ah dhibaatooyinka yar:
Adeeg bixiyahaaga cusub ee Adeegga E-maylka ayaa helay cabasho isla markiibana wuu kaa horjoogsaday inaad soo dirto emayl dheeri ah illaa aad ka xalliso arrinta.
Adeeg Bixiyaha Internetka ama adeegga kormeerka sumcadda ma aqoonsana cinwaankaaga IP wuxuuna xiraa ololahaaga badan.
Bixiyaha Adeegga Internetku sumcad kuma laha cinwaankaaga cusub ee IP-ga wuxuuna ku socdaa dhammaan emaylkaaga galka qashinka.
Ka bilow lugta midig iyadoo leh IP kululaynta istiraatiijiyaddu waa mid muhiim ah marka loo guurayo adeeg bixiye email oo cusub. Intooda badan Bixiyeyaasha Adeegga Emailku heshiis weyn kama galaan arrintaas… kaliya waxay ku xusuusinayaan inaad diiriso cinwaankaaga cusub ee IP-ga. Natiijooyinka ka sarreeya, in kastoo, maahan hawl fudud:
Uma baahnid inaad wax khatar ah ka qaadatid diristaada ugu horraysa, sidaas darteed qaybinta saldhiggaaga macaamiisha ee macaamiisha aad ku hawlan tahay ayaa muhiim ah. Haddii qof waligiis furin ama uusan gujin emayl bilo gudahood probably malaha ma doonaysid inaad ku haysatid ololahaaga Kulaylinta IP-ga.
Ku dhowaad xog-ururin kasta oo macmiil ahi waxay leedahay cinwaanno emayl xun iyo cinwaanno emayl ah oo aan waligood saarin ama nadiifin. Ka hor intaadan dirin olole kuleylinta IP-ga, waxaad dooneysaa inaad ka nadiifiso cinwaanadan emayl keydkaaga.
ISP kasta waxay leedahay mug mug leh oo cinwaanno emayl ah oo laga bilaabayo dhisidda sumcadda waqti ka dib iyaga la jira. Tusaale ahaan, Google waxay rabtaa inaad dirto qadar yar marka hore, ka dibna aad u kordhiso lacagta waqtiga. Natiijo ahaan, waxaad u baahan tahay inaad si taxaddar leh u qaybiso oo aad u qorsheyso ololayaashaada.
Ka dib markii aan naqshadeeyay oo aan horumarinay istiraatiijiyado kuleylinta IP-ga oo guuleysta boqolaal macaamiil ah, asxaabteyda iyo aniga Highbridge Waxaan go'aansannay inaan horumarinno adeeggayaga sanadkii la soo dhaafay si loo fududeeyo hawsha. Noocyada IP Warm waxaa ka mid ah:
Nadiifinta - Hore u nadiifinta xogta macaamiisha si loo yareeyo buunshaha, cinwaannada emaylka ku-meelgaarka ah, iyo dabinnada spam. Waxaan ku xakameynaa diiwaanadan ololaha la soo saaray waxaanan kugu soo celinaynaa xogta si aan u cusboonaysiino diiwaankaaga isha.
Mudnaansho - Waxaan mudnaanta siineynaa macaamiisha iyada oo ku saleysan la shaqeynta ay la leeyihiin shirkadda si loo hubiyo in macaamiisha ugu firfircoon loo diro ololeyaasha kuleylka IP-ga marka hore.
Sirdoonka Domain - Inta badan talooyinka kuleylka ah ee IP waxay si fudud kuugu sheegayaan inaad emailkaaga ku turjumto ISP; si kastaba ha noqotee, taasi ma sahlana sida daawashada bogga cinwaanka emaylka. Xaqiiqdii waan xallinnaa domainka waxaanna leenahay sirdoon ku saabsan adeegga ay u adeegsanayaan inay ku hagaajiyaan ololayaasha. Tani waa mid muhiim u ah shirkadaha B2B kuwaas oo ugu horreyn u diraya aagag ganacsi oo aan ahayn emayllada macaamiisha caadiga ah.
Jadwalka - Waxaan kuu soo celineynaa liisaska ololaha iyo jadwalka dirista ee lagugula talinayo si aad si fudud ugula soo gasho liisaska oo aad jadwal ugu dirto dirista. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah qorsheynta ololaha iyo jadwalka dirista!
Miyaad u guureysaa cinwaan IP wadaag ah oo leh ESP-kaaga cusub?
Xitaa haddii aad tahay suuqgeeye emayl yar oo u guuraya cinwaan IP ah oo lala wadaago Bixiye Adeeg Email oo cusub, nadiifinta iyo u diyaargarowga ololaha aan kuu qabanno ayaa kaa ilaalin doona dhibaatada.
Khariidadda Kulaylka IP
Waxaan ka shaqeyneynaa inaan kor u qaadno barxadda xitaa sii dheereynta isku xirayaasha xogta iyo xitaa jadwalka loo diro iyada oo loo marayo API si shirkaduhu xitaa wax yar u qabtaan. Waqtigan xaadirka ah, inta badan waa adeeg dhamaadka-laakiin waxaan si joogto ah uga shaqeyneynaa dhamaadka-hore iyo horumarintaan.
Haddii aad isu diyaarineyso inaad u haajirto Adeeg Bixiye Email oo cusub, hadda waa wakhti aad u wanaagsan oo aad ku isticmaali karto barxadda maaddaama aan nahay taageero dheeri ah oo aad u gacan qabashada macaamiisheenna!
Ku Bilow IP diiran
Bixinta: Waxaan rafiiq ku ahay IP diiran.
Tags: u heellan ipgaarsiinta emaylkasumcadda emailkaadeeg bixiyaha adeegga emaylkagaar ahaansumcadda ipip diiranip kululaynta appadeegga kululaynta ipla wadaago ip